के कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सम्भावना छ ? : – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/के कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सम्भावना छ ? :
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले लक्षणका आधारमा कोरोनाको पुष्टि र यसका मापदण्ड अनुसार मात्रै सिङ्गो विश्व ब्रह्माण्डमा संक्रमणको दर बढेको देखिंदैन । यो भाइरसले लक्षण तथा मापदण्ड बिना पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको तथ्य हाम्रो सामु छ । बाध्यात्मक परिस्थितिले भनौ वा चेतनाको अभाव, कोरोनाबाट केही हुँदैन भन्ने सँकुचित सोचबाट ओतप्रोत यो समाजमा कोरोना संक्रमण नहोला भन्ने अवस्था छैन । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यो भाइरस हाल विश्वका २१० देशहरुमा फैलिइसकेको छ ।
यो आलेख तयार गर्दैगर्दा विश्वमा कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या २३,३०,९८७ पुगेको छ । कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १,६०,७५७ पुगिसकेको छ । यो भाइरसका बारेमा रेडिमेड टीकाटिप्पणिहरु आउने गरेका छन्, जुन अवास्तविक हो । यसको न त कुनै औषधी नै छ, न त खोप नै । यो वितरणमुखि हो । पटक्कै नियन्त्रण नहुने खालको देखिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाईरसको संक्रमण ३१ जना पुगेको छ । जसमध्ये २ जना निको भएर घर फर्किेसकेका छन् । खुशीको कुरा नेपालमा कोरोना भाईरसका कारण अहिलेसम्म कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । देशभर लकडाउनका कारणले यतिसम्म नियन्त्रण भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । लकडाउन भएर पनि यसको संक्रमण बढ्दै गएको छ ।
एकातिर भोकमरी बढ्ने खतरा छ भने अर्कोतिर बर्षौंदेखी आफ्नो घरबाट छुट्टिएका रोजिरोटीका लागि बिछोडिएका परदेशिएका आत्माहरु मरे पनी आफ्नै देशमा मरिन्छ भनी घर फर्किन आतुर भएका छन् । झण्डै १५ देखि २० लाख नेपाली छिमेकी देश भारतबाट लकडाउन खुल्ने बित्तिकै घर फर्कने सन्देश आ–आफ्नो घरमा पुर्याइरहेका सुनिन्छन् ।
हल्लाको भर नपरौं : नेपालमा अहिलेसम्म मात्र १६ जना कोरोना सं’क्रमित, नयाँ कोही थपिएनन् !